Orlistat maka Ọnwụ Ibu: Olee Otú Ọ Ga-esi Wepu Abụba Ngwa ngwa?
Orlistat maka ọnwụ ọnwụ: Olee otu ọ ga-esi wepụ abụba ngwa ngwa?
1. Gịnị bụ Orlistat?
2. Ònye ka anyị bụ?
3. Kedu ka ọrụ Orlistat si arụ?
4. Kedu ka m ga - esi were Orlistat?
5. Kedu ihe ị ga-ezere mgbe ị na-ewere Orlistat?
6. Orlistat ziri ezi maka m?
7. Kedu uru nke iji Orlistat?
8. Kedu ihe ndị na-emetụta ụbụrụ na-ewere Orlistat?
9. Kedu ihe dị iche n'etiti Orlistat, Sibutramine, na Lorcaserin?
10. Enwere ọgwụ na-emetụta nsonaazụ Orlistat?
11. Ihe omuma nke di mkpa banyere Orlistat
Kedu ihe bụ Orlistat?
N'agbanyeghị ole ole ihe ndị na-efu ọnwụ adaala, Orlistat ga-abụrụ gị ụtụtụ ọhụụ. Ọ bụrụ na ị nọ na-eche ihe ndepụta aha bụ, taa ị ga-amatakwu banyere ya.Orlistat karịrị ahịa ọgwụ ọjọọ kachasị mma nke ahụ na-enyere ndị mmadụ aka ibute ngwa ngwa ngwa ngwa. Chọrọ ụfọdụ ihe akaebe? Nnyocha e mere egosiwo na ozugbo ị na-eji Orlistat, ahụ gị ga-atụfu karịa karịa mgbe ị na-anwụ naanị. Ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ ma ị ga-ewere Orlistat, a ga m agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara uru Orlistat, nsonaazụ Orlistat na ebe ị ga-azụta Orlistat na ị ga-achọ ka ị mara maka ya na mbụ. Ozugbo ị matara banyere ọgwụ ọrụ ebube a, ị ga-aghọta na ọ bụ ọgwụ kachasị mkpa na njem njem ọnwụ gị.
Anyị na Phcoker.com, otu ụlọ ọrụ China nke metụtara nkesa, imepụta, na ahịa nke ndị na-ahụ maka ọgwụ na-arụ ọrụ na ngwaahịa gụnyere Orlistat.
N'ime ụlọ ọrụ anyị, anyị na-ewe ndị mmadụ kachasị mma, ndị anwale ma nwalee site na mpaghara dị iche iche. Ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ anyị na-eweta site na ahụmịhe ha ọkachamara, ọzụzụ magburu onwe ya, na arụmọrụ pụtara ìhè. Dịka ụlọ ọrụ, anyị na-agbasi mbọ ike ịzụlite mmepe ha site na ọzụzụ, ọzụzụ na nkuzi oge niile. Anyị na-enye ha ngwaọrụ zuru oke maka nkwukọrịta iji nye ha ohere ịzaghachi ma mee ka ha nwekwuo mmụọ.
Anyị na-enye ngwaahịa kacha mma n'ahịa. Ikwesighi ịmebi ụlọ akụ ịzụta n'aka anyị; ị ga-eju anya na ego ha dị. Ngwaahịa anyị dị mma, ha ga-ejekwa ozi ahụ. Enwere ike ikwu eziokwu na anyị na-eji ngwá ọrụ mbụ na usoro mmepụta anyị niile. N'oge mmepụta, anyị na-agbaso ụkpụrụ niile na nlezianya dị mma iji hụ na anyị na-enye ngwaahịa ndị na-egbo mkpa ndị ahịa anyị.
Na Phcoker anyị na-arụsi ọrụ ike iji mee ka gburugburu ebe obibi anyị dị ọcha site n'ịhụ na ọrụ ndị anyị na-arụ adịghị emerụ ya. N'ikpeazụ, ndị ahịa anyị bụ ihe kacha mkpa. Ọrụ ahịa anyị dị ezigbo njọ ma na-anabata onye ọ bụla. Ihe ọzọ nke na-ekewapụ anyị site n'aka ndị ọzọ bụ na anyị na-eji nlezianya azaghachi ndị ahịa. Bụrụ onye mkpesa ma ọ bụ nkwenye; A na-anabata olu gị mgbe niile. Zụrụ anyị taa ma nweta ọrụ kacha mma n'ụwa niile.
Kedu otu ọrụ Orlistat si arụ?
Orlistat anaghị arụ ọrụ site n'ịkwụsị agụụ; ọ na-ebelata oke abụba nke ahụ gị na-etinye na nri ị na-eri. Ozugbo ọ na-ejikọta onwe ya na lipze enzyme afo, ọ na-egbochi ya ịkụda ma ọ bụ mebie ụfọdụ mkpụrụ ndụ abụba. Ọnụba nke abụba egbochi bụ banyere 25%. N'ihi ya, abụba na-enweghị isi na-agafe n'usoro usoro a ma kpochapụ ya dịka ihe mkpofu.
Ọzọkwa, nnyocha e mere gosiri na ozugbo ị na-ewere Orlistat, abụba visceral na-ebelata. Uru nke a bụ na ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa strok, ọrịa obi, ọbara mgbali elu, na ụdị ọrịa shuga 2.
Kedu ka m ga - esi were Orlistat?
Iji nweta ọgwụ kachasị mma na ọgwụ a, ị ghaghị ịkwado ya Orlistat usoro onunu ogwu. Na-abata n'ụdị capsule, ị nwere ike ịmepụta otu ma were ugboro atọ n'ụbọchị. Iji mezuo nsonaazụ Orlistat a chọrọ, ọ dị gị mkpa iji ya ozugbo ahụ nri mgbe e nwere abụba ma ọ bụ karịa otu awa mgbe. Ọ bụrụ na ị na-eri nri nke na-enweghị abụba ọ bụla, a gwara gị ka ị wụfuo ọgwụ gị. Ọ bụrụkwa na ị na-eri nri, ị ga-atụle ọgwụ ahụ.
N'agbanyeghị na ị na-etinye ihe mgbapụta ọnwụ, ọ dịghị mkpa ka ị rie bọọcha na-edozi ahụ n'oge niile. Iri nri na abụba ndị ọzọ nwere ike ime ka ahụ ghara iru gị ala. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta uru Orlistat, ị kwesịrị ị na-eri ihe ndị dị ala na abụba na abụba nke anụ. N'ozuzu, nri nke nwere ihe karịrị 30% nke abụba bụ mpaghara aga-aga. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ewere calories 1000 kwa ụbọchị, ọ bụghị ihe karịrị 330 ha kwesịrị ịbụ n'ụdị abụba.
Iji jide n'aka na ị nọ n'ụzọ ziri ezi, debe abụba niile ị na-eri na nri ọ bụla. Kedu ka ị si eme nke a? Gbaa mbọ hụ na ị na-agụpụta aha niile ihe oriri ị na-eri. Site na itinye uche na ọnụ ọgụgụ nke servings ị na-ewere, ị nwere ike nyochaa ọnụ ọgụgụ nke abụba ị ga-ewere. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite atụmatụ ntụrụndụ dị mma, onye dibịa, ọkachamara ma ọ bụ dọkịta nwere ike inyere gị aka. Ihe niile ị ghaghị ịma tupu ịzụta SARM
Ihe ọzọ ị ga-achọ ịma bụ na ihe ndị na-egbochi abụba nke ọgwụ a na-eme ka ahụ gị ghara inwe ike ịmịnye vitamin ndị nwere abụba. Iji gbochie ahụ gị ka ị ghara inwe vitamin, weghaara ọtụtụ multivitamins kwa ụbọchị nke nwere K, E, D, A, na beta-carotene mgbe ị na-agwọ ọgwụ a. Iji mara ụdị nke multivitamins kachasị mma ị ga - ewere, ị kwesịrị ịtụle ka gị na dọkịta gị kwurịta okwu. Otú ọ dị, ị gaghị ewere Orlistat na vitamin ndị a n'otu oge ahụ. Were vitamin ahụ ruo awa abụọ ma ọ bụ karịa tupu iwere ọgwụ ahụ.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - atụfu ọgwụ?
Zere ịlafu ọgwụ. Otú ọ dị, i kwesịghị ichegbu onwe ya ma ọ bụrụ na o mee; were ya n'oge kachasị anya. Ọ bụrụ na elekere hour gara aga ebe ị na-eri nri, zere ịṅụ ọgwụ na-ezighị ezi ma buru nke ọzọ dị ka ndokwa. Enweghi anwa anwa anwa ịmalite ọgwụ ọzọ na ebumnuche nke ịchọrọ maka ọgwụ mgbochi. I nwere ike mebie onwe gị.
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọpụta na ọ na-agụ gị agụụ iri nri akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi naanị. Enweghị nchekasị na iri nri a na-enweghị abụba; ihe niile ị ga - eme bụ ịhapụ ọgwụ Orlistat mgbe nri.
Onu ogugu akwukwo elu di elu enyeghi gi uru. Kama nke ahụ, ọ nwere ike imebi ahụ gị. Ọ bụrụ na ị na-ewere ihe karịrị ọgwụ a tụrụ aro, ị ga-enwe ike ịmịpụta mmetụta ndị metụtara eriri afọ. Ha bụ ndị na-enweghị mmasị na feces, mmanu mmanu, abdominal nsogbu, gas, afọ ọsịsa, ịgba agbọ, na ọgbụgbọ. Mmetụta ndị dị na ya nwere ike ịdị njọ ma ọ bụrụ na ị rie nri dị oke-abụba ma weghaara otu Orlistat.
Ọ bụrụ na nke a emee, ị ga-eburu ya gaa na dọkịta ma ọ bụ kpọọ enyemaka enyemaka nsị.
Kedu ihe ị ga-ezere mgbe ị na-ewere Orlistat?
Ozugbo ị nọ na nhazi Orlistat, ị ga-ezere iwepụta ihe ole na ole. Nke mbụ bụ nri dị oke abụba. Ihe mere ị ga - eji zere nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike ibute mmetụta ndị na - adịghị mma na eriri afọ na afọ. Ọ pụtaghị na ị na-ezere ịṅụ abụba ọ bụla; ebe a bụ ntụziaka banyere otu ị ga - esi belata oke abụba ị na - eri:
Ị nwere ike ịhọrọ iji obere ihe esi nri-na ihendori nke nwere ihe na-erughị 5 grams nke abụba kwa 100 grams nke ihendori.
Gaa maka mgbasa ozi dị ala, abụba na abụba-abụba, obere yogurts dị ka obere calorie, na nri na-edoghị abụba, dịka, skimmed ma ọ bụ mmiri ara ehi.
Zere itinye abụba mgbe ị na-esi nri; kama nkea, ị nwere ike ịnweta igwe onyonyo, ime achịcha, poach ma ọ bụ grill.
Zere iri anụ akpụkpọ anụ na nsị anụ. Ị nwere ike ịga maka nsị anụ ma wepu abụba ọ bụla a hụrụ.
Họrọ mgbasa na-abaghị ala kama ịkwasa mgbe niile / butter.
A gaghị ejikwa Cyclosporine weghaara ya na Orlistat. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya, ọ ga-abụ awa atọ tupu ma ọ bụ mgbe ọ nwụchara.
Ọzọkwa, a ghaghị izere Levothyroxine (dịka Synthroid) n'oge ọgwụ a. Ị nwere ike were ya anọ ma ọ bụ karịa awa tupu mgbe ọ nwụchara.
Orlistat ziri ezi maka m?
N'ịbụ onye na-atụfu ọnwụ, ọ ga-arụ ọrụ maka gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwụsịlata ibu. Nri nri na mmega ahụ nwere ike iyi ihe na-enweghị isi, mana usoro nlekọta njikwa nke gụnyere Orlistat bụ ezigbo ahịa. Ọ bụrụ na ị jiri Orlistat, ọ pụtaghị nke ahụ ị ga-anọdụ ala ma chere maka ihe ga-esi na ya pụta. Ịgbaso ụzọ ndụ siri ike nke na-agụnye iri ahụike na inwe mmega ahụ mgbe nile ga-enyere gị aka ibu dị arọ fọrọ nke nta.
Ọ dị mma ka ị were Orlistat? Ọ bụ ọgwụ kachasị njọ ọnwụ mana olee otu ị si mara na oge eruola ka ị tufuo ibu. Ozugbo ị ghọtara otu esi achọpụta ma ị buru oke ibu, ị nwere ike ịmata mgbe ị ga-eme ihe na mbubata ibu. Ọ bụ ezie na ụzọ kachasị mma iji mara ma ị buru oke ibu bụ site na ịhụ dọkịta, ihe ngosi ole na ole nwere ike inyere gị aka ịgwa ma ị gafere ahịrị. Ihe mbụ nwere ike inye gị oku edemede bụ BMI dị elu. Nọmba BMI egosiri na-egosi ịdị arọ nke anụ ahụ gị kwa mita ma ọ bụ elu anọ. Na ọnya, ị nwere ike ịlele ogo gị na ịdị arọ gị iji chọpụta ma ndepụta ahụ gị (BMI) ọ dị mma. Ọ bụrụ na BMI gị bụ 18.5-24.9, a ga-ahụta na ọ dị mma ka nke nke 25-29.9 na-egosi na ị buru oke ibu.
Ụzọ ọzọ dị mma ịmara ma ibu ibu ka ị na-atụgharị ebe ị na-aga. A na-akpọ ebe mgbagwoju anya nke dị elu karịa 35 sentimita asatọ na ụmụ nwanyị ma ọ bụ 40 sentimita asatọ na ụmụ nwoke na-adịghị mma. Ihe kpatara ya bụ na mgbe ị nwere afọ na-abaghị uru; enwere nnukwu abụba nke gbasara akụkụ gị ndị dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arịwanye elu nke ihe nhụjuanya site na ọrịa mberede, ọbara mgbali elu, cholesterol dị elu na ọrịa shuga. Ọbara visceral na-amịpụta toxins nke na-emetụta ahụ gị n'ụzọ na-ezighị ezi. Otu ihe atụ nke ọgwụ ndị a bụ cytokines nke nwere ike ibute ọrịa ọrịa obi. N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe niile ị chọrọ bụ teepu, ma ị nwere ike ime ya n'onwe gị. Enwere ike ịnwa gị ịṅụ ya, ma nke a ga-enye gị nsonaazụ na-ezighị ezi.
Inwe BMI nke gafere 25 na eriri eriri nke dị elu karịa 40 sentimita maka nwoke ma ọ bụ sentimita 35 maka nwanyị ekwesịghị ime ka ị daa mbà. Ozi ọma ahụ bụ na ozugbo ị na-eji ndepụta aha, lelee nri gị ma malite ịmega ị ga-awụfu pound ndị ọzọ ngwa ngwa karịa ka ị chere. Na ngwa ngwa ị ga - ebido, ọ ga - adịrị gị mma. Nsonaazụ Orlistat bidoro ịmalite ozugbo ịmalitere ọgwụ.
Kedu uru nke iji Orlistat?
N'oge gara aga, ụzọ ị ga-esi buru ibu na-ebelata calorie ị na-ewere. Ha ga-agbanwe nke ahụ burger maka mkpụrụ osisi saịlị, jidere lemon kama ichi achicha na nke a ga-ekwe ha nkwa ọnụ na pound. N'oge a, ị gaghị echefu ịnweta kuki kachasị amasị gị, ihe dị mkpa bụ ịhụ na ị gaghị ewere ya na oge ahụ wepu onwe gi.
N'ịbụ onye na-ebuwanye ibu, ọ gaghị egbochi agụụ gị kama ọ ga-ebelata belata nke abụba na-adịghị mma. Kama igbanwe ego ị na - eri, ọ na - agbanwe ego nke anụ ahụ na - eburu. Ozugbo enwere mpekere nke ụzọ anọ nke abụba ahụ, a ga - amanye ahụ iji nweta abụba echekwara iji nweta ume maka ụbọchị ọ bụla eme ihe.
N'ikwekọ na usoro mmega ahụ na nri dị mma, ọgwụ a ga-enyere gị aka ịkwụsị ibu iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Ọ bụghị naanị na obi ike gị na-aga n'ihu elu kama ịdị mma nke onwe gị na-emewanyewanye. Ndị mmadụ agakwaghị ele gị anya n'ihi abụba ndị dị na saggy; Otuto ndị ọzọ ga-abịa ugbu a.
Ịghara ibu arọ bụ ihe kasị mma i nwere ike ime n'ahụ gị. Ọ na-egbochi gị ịga nleta ụlọ ọgwụ ọ bụla ebe ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke ịnweta ọtụtụ ọrịa gụnyere:
Ihe mgbaàmà nke reflux
Gbanye nsogbu ndị metụtara oke ibu
Aghọrọ ike na-adịghị ike (karịsịa ndị inyom)
Ụfọdụ ụdị ọrịa cancer
Pịnye ọrịa shuga 2 na nsogbu ndị metụtara ya
Ọ ga-eme ka ị nwekwuo ume ma na-agagharị agagharị. Ozugbo ị tufuru ibu, ị ga-ebu obere ibu n'ihi ya enwere obere nsogbu na nkwonkwo na akwara. Ga-agbasi ike ịrụ ọrụ gị na azụ, ụkwụ, ikpere na mgbu ga-abụ ihe gara aga. Ihe ọzọ bụ na anụ ọhịa ọ bụla furu efu n’ime afọ gị na-ebelata nrụgide dị n’azụ gị site na otu narị pound. Gba ụgwọ agaghị abụkwa ọrụ elu ugwu ọzọ; ị nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe n'enweghị nsogbu.
Ị ga-ahụ ọkwa ụfọdụ n'ime ume na ụra gị. Ezigbo ụra ga-enyere gị aka inwe ume karịa ụbọchị niile. N'ozuzu, Orlistat ziri ezi maka ahụike gị dum.
Kedu ihe ndị na-emetụta ụbụrụ na-ewere Orlistat?
Obu ihe kwesiri ihu mmetụta nke Orlistat ozugbo ị na-eji ya. Ị nwere ike ịnweta ụfọdụ mmetụta ndị dị na ya maọbụ ọ bụghị mgbe ị gụsịrị ọgwụ ọ bụla ọzọ. Imirikiti ihe ndị na-abịa n'iji Orlistat mee ihe metụtara ọrụ ọ na-arụ na usoro nsị gị. Ha na-adịkarị nwayọọ ma na-eme mgbe niile mgbe ị malitere ịgwọ. Ha na-eme mgbe ị nwesịrị nri buru ibu. N'ụzọ dị mwute, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha na-apụ ka ọgwụgwọ ahụ na-aga n'ihu ma na-esokwa nri kwesịrị ekwesị.
Mmetụta mmetụta kachasị na-emetụta ihe karịrị otu onye n'ime mmadụ iri ọ bụla bụ:
Isi ọwụwa-Ọ bụrụ na isi gị na-afụ ụfụ, e nwere ụzọ ndị ị ga-esi belata ya. Ọ na-agụnye ịṅụ nsị nke na-egbochi mgbu. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnwa ịnwa ginger tii ma ọ bụ caffeine. Ibe isi gị na ịme ntụrụndụ nwere ike inyere gị aka belata ahụ mgbu. Ụzọ ọzọ ị nwere ike isi nagide isi isi ọwụwa bụ site na iji mpịakọta na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe mgbochi kpo oku iji belata ihe mgbu ahụ.
Abdominal mgbu / obi erughị ala- Abdominal mgbu ekwesịghị ichegbu onwe gị. Ọ bụrụ na ọ na-emetụta ihe ị na-eme kwa ụbọchị, ị nwere ike ịhọrọ ịhapụ ọka wheat kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ ite mmiri na-ekpo ọkụ na afọ gị. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnọ na-asa ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na nke a adịghị ka ọrụ, gbalịa ịṅụ mmiri dị ọcha, dịka, mmiri.
Mkpa dị mkpa iji gaa na nke a- Ọ bụrụ na ịchọta na ị na-emeri karịa ihe ị na-emekarị, hụ na ị gaghị eleghara ọchịchọ ahụ anya. Ileghara oku ahụ anya ga-eme ka mgbaàmà ahụ ka njọ. O kwesịghị ime ka egwu ma ọ bụrụ na ọ nọgidere, chọọ dọkịta.
Ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụgwọ Orlistat, ị nwere ike chọpụta na ị na-eme ka uwe gị ma ọ bụ na-eche na mpaghara gburugburu ebe ị nọ na-agba mmiri. Iji gbochie ịme ihere, ị nwere ike itinye uwe na-agba ọchịchịrị ma buru uwe ọzọ ma ọ bụrụ na ị pụọ n'ụlọ.
Ogwe ụbụrụ-Ịnwe akwa stool pụtara na ahụ adịghị egbutu abụba ma kama iwepụ ya. Site na izere ihe oriri ndị dị oke ụba, ị nwere ike igbochi ahụ gị ka ọ ghara ịhapụ ọtụtụ abụba.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ - Onye ọ bụla hụrụ inwe akpụkpọ anụ, ma ọ bụrụ na akpụkpọ anụ amalite, ebe a bụ echiche iji chebe ya. Nke mbụ bụ iji ncha dị ọcha na-ehicha ahụ gị n'emebighị ya. Ikwusi ma jiri ihe ojoo eme ihe nwere ike ime ihe ojoo karia nma. Ọ bụrụ na ị nwere mmetụta ọ bụla ma ọ bụ ihe mgbu, ị nwere ike itinye akwa mmiri na ọkụ ọkụ. Ngwurugwu hydrocortisone n'elu-na-counter ga-enyere gị aka.
Mgbu azụ - Lee echiche banyere otu esi belata ihe mgbu azụ; tinye okpomọkụ ma ọ bụ akpụrụ na akụkụ nke azụ gị, na-ewere ihe ndị dị ka naproxen, ibuprofen, na aspirin. Imega ahụ pụkwara inye aka belata ihe mgbu ma ọ bụrụ na o nweghị aka, chọọ nlekọta ahụike.
Inwe mmerụ ahụ ọkụ, akpịrị akpịrị, ụfụ, na ọkụ. I nwere ike iche na ị na-ekpo ọkụ iji gbochie ha ịbịa njọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu ọ bụla, ị nwere ike ịzụta ihe mgbochi na-echekwa ihe dịka nchịkọta.
Ihe mgbaàmà na-acha oyi dị ka ụkwara, sneezing, na imi na-adọrọ adọrọ - Ngosipụta oyi nwere ike mgbe ụfọdụ ejikọta na ijiDị ka iru ala dị ka ọ pụrụ ime gị, ebe a ka hacks na-emeso mmetụta. Mee ka akpịrị gị dajụọ, nweta ọtụtụ izu ike ma ṅụọ mmiri dị ukwuu iji gbochie onwe gị ịnwụ. I nwekwara ike iji nzere tụlee iji nyere aka n'ịgbado mgbakọ gọọmenti. Chọọ dọkịta ma ọ bụrụ na mgbaàmà oyi na-emetụta ihe ị na-eme kwa ụbọchị.
Nsogbu na nkwonkwo ma ọ bụ ezé- Iji dozie nsogbu a, ị ga-awụpụ ezé gị mgbe niile, na-asazi akara gọọmentị gị ma jiri ọnụ na-emekarị. Ị nwere ike ime ka ọnụ gị kwupụta n'ụlọ site na ịgwakọta otu ụzọ n'ụzọ anọ nke soda soda, nnu asatọ nke nnu na iko mmiri ọkụ.
Ihe mgbu na-egbu egbu, afọ ọsịsa, vomiting, ọgbụgbọ na afo mgbu - Na-aṅụ ọtụtụ mmiri dị ọcha iji zere ịṅụ mmiri-zere mmanya ma ọ bụ caffeine. Gbalịa na-eri ọgwụ ụbụrụ ma ọ bụrụ na nke a anaghị enyere gị aka, chọọ nlebara anya maka ahụike.
Ọ bụrụ na ị gafee ọ bụla n'ime mmetụta ndị a, ị ga-emeso ya dịka ihe mberede ma kpọọ dọkịta ozugbo. Ha bụ;
Oké mgbu mgbu nke na-adịghị apụ.
Hives ma ọ bụ ịbịcha ya
O siri ike ilo
ike iku ume
Kedu ihe dị iche n'etiti Orlistat, Sibutramine, na Lorcaserin?
Akara tụnyere Orlistat (96829-58-2) Sibutramine (84485-00-7) Lorcaserin(846589-98-8)
Ụdị omume Kedu otu Orlistat si arụ ọrụ? Orlistat na-arụ ọrụ site na igbochi nri abụba n'ime ahụ. N'ihi ya, ahụ na-eji abụba ahụ echekwara nke na-eme ka ọ ghara ibu ibu. Lorcaserin na-arụ ọrụ site n'ime ka mmadụ nwee mmetụta zuru ezu ma si otú ahụ belata ego nri. Ọ na-eme nke a site n'ịkpali ndị ntinye aka nke Serotonin 2C. Sibutramine na-arụ ọrụ site na-agbanwe ụzọ ndị na-ahụ maka ntanetị n'ime ụbụrụ na-arụ ọrụ. Ọ na-egbochi mmighachi ha site na nke a iji gbanwee ụzọ anụ ahụ na-ebu arọ.
Mmetụta dị n'ahụ Orlistat na-eme ka mmetụta kachasị na-emetụta usoro nchịkwa dịka, stool dị ọcha, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa na ịgba agbọ. Maka Lorcaserin, ọ na-akpata ya; lymphocypenia, euphoria, hemoglobin na-ebelata na isi ọwụwa. Sibutramine na-akpata nchekasị, obi mgbu, ọkụ ọkụ, otutu, mgbu abdominal, ọnụ akọrọ, isi ọwụwa na enweghi ike ihi ụra.
Sibutramine nwere ike belata ihe dị arọ site na 4.2% n'otu oge otu afọ ma Orlistat nwere ike belata ya na 5% mgbe Lorcaserin belata ya na 5-10% na ọnwa iri na abụọ.
Enwere ọgwụ na-emetụta nsonaazụ Orlistat?
Nke a bụ ndepụta nke ọgwụ na-ejikọ na Orlistat.
Nkwonkwo ojii (Nkwado Ndị Menopause)
Interferon beta-1a (Avonex Pen, Mmekọrịta Ejiri Ejiri Egwu, Rebif Rebidose, Rebif, Avonex)
Insulin zinc ịgbatị (Humilin U)
Insulin mgbe niile
Inye ọgwụ insulin, ngwa ngwa
Mmeghari uche nke na-eto eto
Multivitamin na mineral
Multivitamin na ígwè na fluoride
Ọ na-agba gị ume
Ozi dị mkpaeme ihe banyere Orlistat
Tupu iwere Orlistat, enwere nkọwa dị mkpa ị chọrọ ịma banyere ya.
Nke mbụ bụ na ị gaghị eji ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị na-eche ya ahụ. Ọ bụrụkwa na ị nwere malabsorption na-adịghị ala ala (ọ bụ enweghị ike itinye nri na nri n'ụzọ kwesịrị ekwesị) ma ọ bụ nsogbu ọ bụla gallbladder. Kedu Ka Synephrine HCL Si Arụ Ọrụ Gị?
Ị ga-agwa dọkịta gị ihe niile gbasara ahụ ike gị. Ọ gụnyere ịkọrọ ya banyere ọrịa ndị ị tara ahụhụ n'oge gara aga na ọgwụ ọ bụla ị na-ahụ. Onye dọkịta kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa imeju, ọrịa iri nri, ụdị 1 ma ọ bụ 2 ọrịa shuga, pancreatitis, gallstones ma ọ bụ underactive thyroid. Ọ bụrụ na ị na-eji ọgwụ ọ bụla dị njọ, ị ga-ala azụ ịgwa dọkịta.
Onye ọ bụla dị afọ iri na asatọ agaghị eji Orlistat. Ma a ga-ede ma ọ bụ karịa na mpempe akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-achọ ndụmọdụ dọkịta ma ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru 18.
Orlistat naanị ga-ewere ya site na onye a na-atụ aro iji. Ihe kpatara ya bụ na ọ nwere ike ịza ha karịsịa ma ọ bụrụ na ha nwere nsogbu iri nri. Kedu ka ị ga esi ezere nke a? Debe ya anya site na iru ndi ọzọ.
Iji nweta ihe kacha mma Orlistat results ị gaghị eji ọgwụ a eme ihe. Ọ ga-abụ akụkụ nke usoro ihe mgbapụta dị arọ gị ma bụrụ nke a ga - ejikọta ya na mmega ahụ na nri. Iji nọgide na-ahụ ike gị ka ị na-aṅụ ọgwụ a, hụ na na nri ọbụla ị na-eri, ị na-eburu carbohydrates, protein, na abụba ọbụla. Tụkwasị na nke a, soro nri gị na imega ahụ.
Zere iri nri dị oke ụba n'ihi na mgbe ị na-ewepụta ha na Orlistat, ị nwere ike ịkwụsị inwe mmetụta ndị na-adịghị mma na eriri afọ na afo.
Nne ọ bụla dị ime ma ọ bụ nke na-enye nwa ara agaghị ewere Orlistat. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na enwere ike inyefe ya nwa ebu n'afọ ma ọ bụ nwa na-ackụ ara. Gbaa mbọ hụ na ịnara ule ime tupu ị kpebie iji Orlistat. Ọ bụrụ na ị tụrụ ime mgbe ị na-a drugụ ọgwụ a, gwa ndị ọrụ ahụike gị. Kpachara anya mgbe ị na-ativesụ ọgwụ mgbochi n'ihi na ọgwụ a nwere ike ime ka ha ghara ịba uru.
Orlistat bụ ihe ngwọta kasịnụ maka nhụjuanya ọnwụ gị. Nsonaazụ Orlistat egosila na ọ ga - enyere gị aka ida karịa otu lb n’izu; nke a bụ ike ọnwụ. Ọzọkwa, ọ na - enyere gị aka idobe ibu gị ka ị ghara ịdị mma taa ma nwekwaa ibu gị niile mgbe ụbọchị ole na ole gachara. Lelee nri gị ma rie ahụike. Don'tkwesighi ịkụnye ibe na otu chocolate n'otu oge. Nwere ike ịchekwa ụfọdụ maka echi. Mmega ga - enyere aka mee ka usoro a dị mfe, ụzọ kachasị mfe ị ga - esi mee ya bụ mgbatị ahụ. Inwe onye na-enye gị ọzụzụ ga-enyere gị aka ijide mkpịsị ụkwụ gị. Ọ ga-enyekwa gị ndụmọdụ kacha mma mgbatị ahụ gị. O nwere ike ịbụ ịgba ịnyịnya ígwè, igwe ma ọ bụ obi. Ọ bụrụ na ị bụghị onye mgbatị ahụ, ịnya igwe ma ọ bụ ịgba ọsọ nwekwara ike ị baara gị uru.
Orlistat bụ ọgwụ FDA kwadoro ka ọ ghara ịdị arọ nke a maara nke ọma maka ịdị irè. Nyocha ndị Orlistat na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ya na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ya ihe karịrị 5% nke ngụkọta ha niile n'ime otu afọ. Uru ya agabigala ifelata ebe ọ bụ na ọ na-ebelata ohere nke ịnweta ọnọdụ egwu dị ka ọbara mgbali elu na ọkwa cholesterol dị elu.
Might nwere ike ịnọ na-eche ebe ị ga-azụta Orlistat ka ị hụ anwansi ọ na-ebu n'ibu gị. Na Phcoker.com, anyị na-ere Orlistat nke adịghị ọcha ya. Na Orlistat ego bara uru, anyị ga-ekwukwa na ị ga-abara uru ọ bụla ị na-eji. Idebe iwu na anyi anaghị ewe oge gị, ihe niile ị ga - eme bụ jupụta nkọwa gị, ajụjụ ọnụ ma chere maka nkwado nke iwu gị. Ozugbo i mere ugwo, anyị ga-eziga ọgwụ ahụ, ma ị nwere ike ijide n'aka na ọ gaghị adị ogologo iji nweta ọnọdụ gị.
Hapụ ibu ibu ngwa ngwa ekwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya. Zụta Orlistat taa, gbapụta mkpụrụ ọgwụ na nkasi obi nke ụlọ gị ma lelee ịdị arọ gị belata nke ukwuu.
Nchịkọta nri na mmetụ ahụ, nke Armand B. Christophe dere, Stephanie R. De Vriese, Stephanie DeVriese, peeji nke 426-437.
Ọganihu na Nnukwu Nchọpụta: 9, nke Geraldo Madeiros-Neto dere, Alfredo Halpern, Claude Bouchard, peeji nke 1046.
Obesara na ibu ibu na Primary Care-Site Colin Waine, Nick Bosanquet, 68-71 peeji nke.